Muddayn: Dariiqii Soomaaliya: Laga soo billaabo burburkii 1991 illaa dowlad rasmi ah. (Xog culus) - Caasimada Online
Home Warar Muddayn: Dariiqii Soomaaliya: Laga soo billaabo burburkii 1991 illaa dowlad rasmi ah....
Muddayn: Dariiqii Soomaaliya: Laga soo billaabo burburkii 1991 illaa dowlad rasmi ah. (Xog culus)
Taniyo burburkii dawladdii dhexe 1991-dii, Soomaaliya waxay soo yeelatay dawlado ku meel gaadh ahaa oo is-daba jooga, iyagoo qaar ka mid ah aysan anfac lahayn ama ay ahaayeen sidii wax aan jirin. Balse dhalashada dawlad cusub oo rasmi ah darteed, Soomaaliya waxay bilowday inay ka tagto xilligii kala guurka ahaa.
Juunyo 1991: Shan bilood kaddib markay dhacday dawladdii dhexe ee Soomaaliya, Madaxweynaha Jabuuti Xassan Guuleed Abtidoon wuxuu ku casuumay kooxaha dagaalamaya inay ku wada hadlaan Jabuuti markii ugu horraysay.
Oktoobar 1996: Madaxweynii hore ee Kenya Daniel Arap Moi wuxuu ku casuumay saddexdii hoggaamiye kooxeed ee ugu waynaa– Cali Mahdi Maxamed, Xusseen Caydiid iyo Cusmaan Caato — wada hadal nabadeed oo Nairobi lagu qabanayay.
Nofeembar 1996-Janaayo 1997: Dadaal nabadeedkii Moi waxaa hor joogsaday Itoobiya markay ka casuumeen 26 kooxood shir nabadeed ka dhacay Sodere, Ethiopia. Wada hadalladii Sodere waxay socdeen Nofeembar 1996 illaa Janaayo 1997, iyadoo 41 hoggaamiye qabiil ay matalayeen 26 kooxood.
Nofeembar 1997: Shirkii Sodere waxaa marin habaabiyay shir kale ee dib-u-heshiisiin ah oo Qaahira loogu qabtay kooxaha Soomaaliya oo dagaalku ka dhexeeyo.
Diseembar 2003: Guddigii maamulka DQKM waxay baahiyeen inay masalifeen.
Oktoobar 2002-Oktoobar 2004: Guddi Dawladeedka Horumarka (IGAD) ayaa maal galiyay Shirkii Dib-u-heshiisiinta Qaranka Soomaaliya ee ka dhacay Eldoret, Kenya. Wada hadalladu waxay horseedeen in la aqbalo Qaraarka Ku-meel-gaadhka Federaalka ah iyo doorashadii Cabdillahi Yusuf Axmed madaxweynaha Dawladda Federaalka ee Ku-meel Gaadhka ah (DFKM), taasoo bedeshay DQKM. DFKM waxaa loo qorsheeyay inay Soomaaliya ka gudbiso xilliga kala-guurka ah markuu wakhtigeedu dhamaado Agoosto 2009.
Janaayo 2009: Sharci dajiyeyaasha Soomaaliya waxay ku doorteen Jabuuti Madaxweynaha DFKM Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyagoo 2 sano ku kordhiyay xilligii DFKM oo ahaa shan sano.
Febraayo 2011: Baarlamaanka Soomaaliya wuxuu u codeeyay in saddex sano oo dheeraad ah loogu sii daro xilligii loo qorsheeyay Hay’adaha Federaalka ee Ku-meel-gaadhka ah iyagoo diidmo kala kulmay daawadayaasha caalimiga ah. Waxay taasi dhalisay xurguf ka dhex dhalatay afhayeenka baarlamaanka iyo madaxweynaha oo mid waliba uu dalbaday in xilligiisa oo kaliya la kordhiyo.
Sebteembar 6, 2011: Hoggaamiyeyaal Soomaaliyeed iyo kuwo caalami ah ee joogay Muqdisho ayaa ku dhawaaqay Qorshaha Nabadda, liis qoraya daraasiin hab oo loogu hoggaaminayo Soomaaliya dawlad rasmi ah. Waxaa ku jiray qorsheyaal looga hortagayo burcad badeednimada, lagu askaraynayo kooxaha maleeshiyada maxalliga ah, u diyaar garowga doorashada, qaabaynta hawlgallo nabad-dhisid iyo ka hortagga musuq-maasuqa.
Diseembar 24, 2011: Hogaamiyeyaal ka kala yimid baaxada Soomaaliya ayaa saxiixay Heshiiskii Garoowe, iyagoo qorshe u sameeyay dawlad rasmi ah una qoondeeyay tiro go’an xildhiibaanimada dumarka ee baarlamaanka.
Maarso 26, 2012: Hogaamiyeyaal Soomaaliyeed ee ku sugan Gaalkacyo ayaa aqbalay inay hawlgaliyaan tallaabooyn muhiim ah oo ku jiray Qorshaha Nabadda si loo gabagabeeyo xilliga kala-guurka, iyagoo waasiciyay heshiisyadii hore ee Garoowe kuna sii dheeraaday sharaxa tallaabooyin la’isku raacinayo dawlad goboleedyada Soomaaliya.
Maayo 31-Juunyo 1, 2012: Hoggaamiyeyaal Soomaaliyeed iyo kuwo caalami ah ayaa ku kulmay Istanbul, iyagoo ugu baaqay beesha caalamka inay sii wadaan taageeradooda dhisidda iyo si fiican u qalabeynta ciidamada ammaanka Soomaaliya, oo ay ku jiraan ciidanka bilayska qaranka, badda, ilaalada badda iyo hay’ado sirdoon inta ay socoto dib-u-heshiisiinta Soomaaliya.
Juunyo 20-21, 2012: Shir rasmiyeed laba maalmood socday ayaa dhex maray DFKM iyo Somalilandoo lagu qabtay London, kaasoo dhaliyay wada-hadalkii koobaad oo toos u dhex mara labada kooxood in ka badan 20 sanadood.
Maayo 21-23, 2012: Kuwii saxiixay Qorshaha Nabadda oo ku kulmay Addis Ababa kuna heshiiyay muddooyin is-daba taxan oo loo qabtay dhisidda hay’ado munaasab ah iyo in loo sameeyo Soomaaliya dastuur cusub.